Iche iche nri gị na ihe oyiyi | Martech Zone
Otu enyi m na onye ọrụ ibe m, Pat Coyle, nyere m otuto banyere m blog. O kwuru na otu n'ime ihe ọ na-ahụ bụ na m na-ewepụta oge oge niile iji tinye ọrụ na onyonyo yana ọdịnaya. Ọ bụ eziokwu n'ezie - ihe m na-eme na ntinye ọ bụla. Nke a bụ usoro ọsọ ọsọ m dị mfe:
Ọ bụrụ na enweghị m onyonyo ma ọ bụ vidiyo maka isiokwu ahụ, achọrọ m otu mpempe akwụkwọ nnọchi anya nnọchi anya Microsoft Mpempe akwụkwọ saịtị. Achọrọ m iji Firefox ka m nwee ike chekwaa gif nke onyonyo na desktọpụ m ka bulite nfe. Iji IE na - eme ka ị gabiga usoro ihe mkpirisi Clip art na Office… naanị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ idezi ma ọ bụ tụọ onyonyo ahụ
Ọ bụrụ na m nwere onyogho, m na-ebutekarị ya n'ime Onye na-ese ihe ma gbalịa ịha ya ka ọ daba n'ọnọdụ m nwere. Achọghị m onyogho ndị pere mpe ma were oghere kwụ ọtọ… Aga m ejikarị mmezi = aka ekpe ma ọ bụ itinye aka nri = aka nri iji tinye ha n'akụkụ abụọ nke nbata ahụ ka ọ ghara ịbanye n'ụzọ ị na-agụ ntinye , ma ọ ka na-agbakwunye ya ụcha.
Nke a bụ ihe ọzọ kpatara m ji gbakwunye nka clip: RSS. Mgbe etinyere ndị na-eri nri na nri m, achọrọ m ịiche onwe m na ndepụta nke ederede ederede ha na-enweta kwa ụbọchị. Achọpụtara m na m na-enyocha isiokwu na ọdịnaya… mana anaghị m ese foto nke m na-ahụ na ndepụta.
Nke a bụ ihe nlele… nke na-adọrọ uche gị?
Dị iche na ndepụta gị! Jiri ihe oyiyi! Enweghị m ike ịchọpụta ma nke a na - eduga n'ịgụ ma ọ bụ njigide ụba increased mana eziokwu ahụ bụ na Pat chọpụtara na-eme ka ọ dị m ka ọ nwere ike.
The New Economy: Nye ya
Ọkt 12, 2006 na 3:07 AM
Bụ eziokwu. Ọ bụrụhaala na ọ ga-edebe opekempe - Ọ na-amasị m RSS n'ihi na ọ hụrụ m ọkpụkpọ aka-elu 😉